I-101 YETATOO ZOMNQAMLEZO EZIBALASELEYO ZAMADODA: IZIMVO ZOYILO OLUPHOLILEYO (ISIKHOKELO SIKA-2021) - IITATTOOS
Eyona Iitattoos I-101 yeeTattoos eziMnqamlezo eziBalaseleyo zaMadoda
Iitattoo zomnqamlezo yenye yezona zinto ziyaziwa kakhulu yoyilo lwabafana. Ukufakwa i-inki ngokulula ngumculi onobuchule, ii-tattoos ezipholileyo zomnqamlezo zamadoda azinasiphelo, zinesibindi kwaye zinentsingiselo. Ayisiyiyo kuphela ukuba i-tattoo yomKristu enomnqamlezo enezenkolo kunye nenkcubeko, kodwa eyona mifanekiso ilungileyo ijongeka imangalisa kulo naliphi na ilungu lomzimba. Ukusuka kumvambo we tattoo kwi isifuba , ingalo , igxalaba, umva , umkhono , isandla , okanye intamo , abafana banokufumana tattoo entle yenkolo naphina. Ngapha koko, unokufumana umvambo omncinci owenziwe ngomnwe okanye esihlahleni.
Kodwa ngeendlela ezininzi ezahlukileyo zomvambo, ezinje ngomnqamlezo, umnqamlezo weCeltic, iMalta, ubuhlanga, umnqamlezo onamaphiko, kunye nezikimu zemibala eyahlukeneyo (emnyama nemibala) onokuyicela, kubalulekile ukuba ufumane ilungelo, elikhethekileyo ujonge ngaphambi kokundwendwela igcisa. Jonga igalari yethu yee-tattoos ezingama-101 eziphambili zomnqamlezo zoyilo kunye nenkuthazo.
1Iindidi zeTattoos zomnqamlezo
1.1Iimpawu zoMnqamlezo zamaKristu
1.2IiCattoos zomnqamlezo weCeltic
1.3Iimpawu zeMalta zoMnqamlezo
1.4IiTattoos zoMnqamlezo weSizwe
MbiniApho unokufumana khona iiTattoos zomnqamlezo
3Izimvo eziPholileyo zeTattoo
Iindidi zeTattoos zomnqamlezo
Ezinye ii-tattoo zomKristu ezinqamlezileyo zineenkolelo zonqulo, kodwa uninzi zinokulandelwa kunye neentsingiselo zehlabathi. Ngelixa uninzi lwamaKhatholika egxila kuYesu waseMnqamlezweni umvambo njengomfuziselo wedini, kubalulekile ukuba uyile kwaye ukhulule ukucinga kwakho ngombono ocacileyo, obonakalisayo.
Nokuba yitattoo yakho yokuqala okanye akunjalo, ukuphonononga imifanekiso yemizobo eyahlukeneyo yeyona nto iphambili ekufumaneni eyona nto uyihambisayo kunye nokuziveza. Musa ukoyika ukuxubana kunye ne-badass half okanye imikhono epheleleyo !
Iimpawu zoMnqamlezo zamaKristu
Umnqamlezo wamaKristu unxibelelene nenkolo kunye nenkolelo, kodwa uyaxatyiswa ngenxa ye-aesthetics. Ifuzisela uYesu Krestu, uThixo, ubuKrestu, ukholo, ukomelela kunye noloyiso, kwaye unokuhonjiswa ngeentyatyambo, iirosari, iingcaphuno zeBhayibhile, amaphiko, okanye umfanekiso kaYesu Krestu.
Iqhelekile ngombala omnyama nengwevu, i-tattoo yomnqamlezo inokuba nemibala kwaye icace xa idityaniswa wavuka okanye amaphiko eengelosi.
amadoda angaphakathi e-bicep tattoo
IiCattoos zomnqamlezo weCeltic
Umnqamlezo weCeltic yeyona nto intsonkothileyo yoyilo lomnqamlezo. Ikwabizwa ngokuba ngumnqamlezo waseIreland, luphawu lwenkolo yamaCelt, kwaye imele ubunye, ithemba kunye nokulingana. Ezinye iinguqulelo zinomnqamlezo owenziwe ngaphandle kweziporo kunye namaqhina njengoko emele unxibelelwano phakathi kwenyama, yokomoya kunye nesangqa sobomi.
IiCeltic cross tattoos zihlala ziyimpawu kwaye zisetyenziselwa ukukhumbula abathandekayo abalahlekileyo. Zibukeka zintle ngombala omnyama, golide, luhlaza, nobomvu.
Iimpawu zeMalta zoMnqamlezo
Umnqamlezo waseMalta ungakhangeleka uqhelekile kuwe. Ukubonisa isibindi nokuzincama, iingalo zomnqamlezo ziyafana kwaye zinjengekrele. Le tattoo yomnqamlezo ihlala idlalwa ngamalungu omkhosi, amajoni, abacimi-mlilo, amagosa asebupoliseni kunye nabanye abasebenzi bakarhulumente.
IiTattoos zoMnqamlezo weSizwe
IiTattoos ezinqamlezileyo zesizwe zibonelela ngendlela epholileyo yokwenza ubugcisa bakho. Ngokudibanisa umnqamlezo kunye noyilo lwesizwe, abafana banokwenza umfanekiso othe tyaba oya kulunga kakuhle ngasemva okanye isifuba .
Apho unokufumana khona iiTattoos zomnqamlezo
I tattoo yomnqamlezo inokuqhutywa kwiindawo ezininzi zomzimba kwaye ixhomekeke kwisitayile kunye nobungakanani obubuthumeleyo. Umbindi womqolo ongaphezulu, isifuba , iingalo ezingaphezulu , kunye umlenze ongezantsi ziindawo eziqhelekileyo zabafana njengoko zibonelela ngemizobo emikhulu yegcisa. Umnqamlezo, umnqamlezo weCeltic okanye umnqamlezo onamaphiko eengelosi ujongeka umhle kakhulu emqolo okanye esifubeni ukuba unemisipha.
Ukwenzela i isandla , isihlahla, okanye umnwe, singacebisa umvambo omncinci, olula we tattoo.
Ngapha koko, i ingalo okanye ingalo yenza iseyile enkulu yemikhono ye tattoo enqamlezileyo ethe tyaba i-bicep kunye negxalaba. Unokudibanisa umnqamlezo kunye neengelosi, amaqhawe, i-rosari, kwaye mhlawumbi unika umvuzo kwiintsapho.
Ekugqibeleni, umnqamlezo yenye yezona tattoos zibalaseleyo emadodeni. Inokuba ngomsindo okanye icekeceke, igcwele okanye ibengqindilili, esifubeni okanye ngasemva, kwaye inokulungiselela iingcinga zoyilo ezipholileyo . Yiyo leyo wena ndifuna ukuba njalo.
Izimvo eziPholileyo zeTattoo
Nokuba sithini na isizathu sokuba ufumane i-inki, nazi iiTatoo ezingcono zokuwela.
ubuso obungqukuva ukucheba amadoda
phoenix tattoo emnyama namhlophe
buzz esikwe ngeendevu
Inxalenye yepompadour yecala iyaphela
UCristiano Ronaldo uchebe iinwele